पुस्तक सिफारिश - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
एउटा नयाँ नियम प्रसारण जसले दिमाग र एचलाई चकित तुल्याउँछअयस्क छुनु भयो।
नयाँ नियमको यो स्थानान्तरणको साथ, फ्रेड रित्साउप्टले तपाईंलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउनेछ जुन येशुले "अब्बा, फादर" भनेर चिनाउनुभएको थियो। उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा प्रवेश गर्ने परमेश्वरको निमन्त्रणा पाठमा हाइलाइट गरिएको छ।
यस स्थानान्तरणले मौलिक ग्रीक पाठमा बफादारीको साथ आजको स्थानीय भाषाको ताजा जीवन्ततालाई जोड्दछ। गर्भपातको अनुपस्थिति, स्पष्टीकरणात्मक संक्रमण र सुन्दर वाक्यले पढाइलाई शुद्ध आनन्द दिन्छ।
जो कोहीले पनि यो बुबाको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पत्ता लगाउँदछ, अन्तमा "घरमा"। हाम्रो इच्छा र प्रार्थना छ कि यो प्रसारण घरको बाटोमा तपाईंको साथी हो।
झोपडी - परमेश्वरसँग एक सप्ताहन्त
म्याकेन्जीको कान्छी छोरी वर्षौं बितेकी थिइन। तिनीहरूको अन्तिम ट्रेस परिवारको शिविर स्थलदेखि टाढा थिएन ज the्गलमा एउटा शरणस्थानमा भेटियो। चार बर्ष पछि, उनको गहिरो शोकको बीचमा, म्याकेन्जीले यस झुप्पालाई रहस्यमय आमन्त्रित गरे। तपाईका प्रेषक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उसको शंकाको बाबजुद, म्याकेन्जीले निम्ता स्वीकारे। अज्ञातमा यात्रा सुरु हुन्छ। उसले त्यहाँ जे पाउँछ उसले म्याकको संसारलाई सदाका लागि बदल्छ।
मेलविन जे। Sandström
एक अपरिचित व्यक्ति एक वृद्ध मानिस, धर्मशास्त्रका प्राध्यापक, अन्धा केटी, बिशप, समृद्धि सुसमाचारको प्रचारक र एक वेश्यामा देखापर्छ। उहाँ तिनीहरूको जीवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, असजिलो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ - र आफूलाई येशू भनेर प्रकट गर्नुहुन्छ। घुसपैठ गर्ने एक ईश्वरशास्त्रीय कथा हो, जुन ऐतिहासिक घटनाहरूले समृद्ध भएको छ, जसले डोस्टोभस्कीको प्रख्यात पाठ "द ग्रान्ड इन्क्वीसिटर" लाई २१ औं शताब्दीमा सार्यो। येशू यस पृथ्वीमा विश्वास फेला पारेन भनेर लुकेको देखिन्छ। रहस्यमय रूपमा अन्तर्निहित मुठभेडहरूमा, छ मुख्य मुख्य पात्र मात्र होइन, तर यो प्रश्न उठ्छ: येशू देखा पर्नुभयो भने हामी के गर्नेौं?
ब्रुनेन भेरलाग बासेल, ISBN: 978-3-7655-1820-1
म यो जस्तै बाँच्न पागल हुनु पर्छ
"कन्भर्सन टू रेडिकल सक्सेन्सीन" ले यस पुस्तकका लेखकलाई बेघरका साथै इराकमा पनि एक शान्तिकर्ताका रूपमा अगुवाइ गर्दछ। उत्कटता, रचनात्मकता र विश्वासले भरिएको कहानी जुन प्रेमको साना कार्यहरू मार्फत विश्व परिवर्तन गर्दछ ...
तपाईं कसरी एक इसाईको रूपमा बस्नुहुन्छ? शेन क्लेबोर्नले यस प्रश्नलाई असाधारण तरिकामा अग्रसर गर्दछ। उहाँ कलकत्ताको यात्रा गर्नुहुन्छ र मदर टेरेसासँग गरीबहरूको सबैभन्दा गरीबमा पुग्नुहुन्छ - र त्यहाँ उहाँ भगवान्लाई पूर्ण रूपमा नयाँ तरिकाले भेट्नुहुन्छ। उनको "कट्टरपन्थी उत्तराधिकारमा रूपान्तरण" ले उनीहरुको व्यावसायिक योजनाहरुलाई बिगार्‍यो र उनीहरुलाई सम्पन्न समाजका बिर्सिएका मान्छे संगै शहरको केन्द्रमा बस्तीमा पुर्‍यायो र सन् २०० 2003 मा इराक युद्धको शुरुवातमा बगदादमा शान्ति कार्यकर्ताको रुपमा गए। "प्रेमको चरमपन्थी" ले उत्कटता, रचनात्मकता र विश्वासले भरिएको कहानी बताउँदछ जुन साना प्रेमका कार्यहरू मार्फत विश्व परिवर्तन गर्दछ।
भगवानको अपूरणीय प्रेम
समुद्रमा आँधी चलेको दिनको कल्पना गर्नुहोस्: तपाईंको जहाज छालहरूले अगाडि फ्याँकिन्छ र प्रकृतिको दयामा हुन्छ। शक्तिहरू जुन एकै समयमा अज्ञात र अद्भुत छन्। Brennan मैनिंग को लागी, यो हामी मानिसहरु को लागी परमेश्वरको प्रेम को एक फिटिंग तस्वीर हो - एक भावुक प्रेम कि कुनै सीमाहरू जान्दैन। यस गतिशील सन्देशको साथ, प्रख्यात लेखकले मुख्य रूपमा मानिसहरूलाई बोल्दछ जो धर्मको बोझ मुनि संघर्ष गरिरहेका छन्। जोसँग यस्तो भावना छ कि उनीहरूले कहिल्यै परमेश्वरको मागहरू पूरा गर्दैनन्। यस सानो पुस्तकमा परमेश्वरप्रति तपाईंको दृष्टिकोण एक पटक र सबैको लागि परिवर्तन गर्ने क्षमता छ।
प्रेमको अन्तिम शब्द छ
रब बेलले स्वर्ग र नरक, न्याय र अनुग्रहको पुरानो प्रश्नको साथ पकड गर्छ र एक साहसी, उत्तम आपत्तिजनक तरीकाले, भगवानको चित्रण गर्दछ, जसमा प्रेमले अन्तिम शब्द राख्छ।
सबै समयका असंख्य इसाईहरू एकातिर कसरी विश्वासले भन्न सक्दछ भन्ने प्रश्नको समस्यामा परेका छन: परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र अर्कोतर्फ लाखौं मानिसहरू परमेश्वरबाट सदाको लागि अलग रहन सक्ने सम्भावनामाथि जोड दिन्छन्। यस पुस्तकमा रब बेलले यस तनावबाट उत्पन्न हुने प्रश्नहरू पत्ता लगाउँदछन्। परमेश्वरले मानव स्वतन्त्रतालाई कसरी गम्भीरतासाथ लिन सक्नुहुन्छ जुन प्रेम चाहिन्छ र साथसाथै सबै मानिसहरूलाई आफ्नो प्रेममा जित्न उसले आफ्नै लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ? र मुक्ति, दण्ड, पश्चाताप, स्वर्ग र नरकको बाइबलीय शर्तहरू कसरी बुझ्न सकिन्छ? यस पुस्तकले असामान्य परिप्रेक्ष्यहरू देखाउँदछ जुन आविष्कारमा डोर्‍याउँछ: शुभ समाचार हामीले सोचेभन्दा उत्तम छ।
जंगली geese को रोदन
वेन जेकबसेन, डेभ कोलम्यान
ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र हुन स्वतन्त्र बनाउनुभयो! त्यसैले दृढ उभिनुहोस् र बन्धनको जुवा तिमीमाथि फेरि नहोस्! (गलाती ५:१)। ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको यस स्वतन्त्रतामा आज हामी कसरी व्यक्तिगत र सामुदायिक रूपमा धेरै व्यावहारिक रूपमा बाँच्न सक्छौं? हामीलाई यो स्वतन्त्रता खोस्न खोज्ने धार्मिक बाधाहरूलाई कसरी उजागर गर्न सक्छौं? लेखकहरूले यी प्रश्नहरूमा गैर-फिक्शन पुस्तक लेखेका छैनन्, बरु हामीलाई जेक कोल्सेनको रोमाञ्चक कथामा लैजानुहोस्। जेक, सुरुमा अझै पनी एक मुक्त चर्च को सह-पादरी, आफ्नो ईसाई धर्म र पैरिश जीवन संग सन्तुष्ट थिए जब सम्म उसको जीवन मा चीजहरु उसलाई केहि प्रश्न सोध्न, र हो, जब सम्म उनी यो अवर्गीकृत अपरिचित भेट्दैनन् कि अपरिचित येशू को बारे मा कुरा गर्दछन्। जस्तो कि उसले उसलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको थियो। उसको जीवन शैलीले जेकको अघिल्लो विश्वासलाई मूलमा हल्लायो। के उहाँ जोन हुनुहुन्छ, चेला जसलाई येशूले भन्नुभयो उहाँ नआउन्जेल बाँच्न सक्नुहुन्छ? जंगली गिजको रोएको तेह्र मुठभेडहरूमा वर्णन गरिएको छ जेकले यो अनौठो अपरिचित व्यक्तिसँग के अनुभव गर्छ। यसको मद्दत संग, उहाँ आफ्नो सबैभन्दा ठूलो डर को सामना गर्न मा सफल हुनुहुन्छ, अत्यन्तै कठिन परिस्थिति मा महारत हासिल गरीरहनुभएको छ र अन्तमा एक खुशी र स्वतन्त्रता को अनुभव गरीरहनुभएको छ कि उसले मात्र अब सम्म सपना देख्न सक्छ।
साम वाकरसँग एउटा अनौंठो सपना छ: भगवानले उसलाई व्याकरण सिकाउने प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। बेरोजगार उत्पादन डिजाइनर यसलाई एक विचित्र कल्पनाको रूपमा खारेज गर्दछ। तर अचानक अचानक परमेश्वर साम भान्साको टेबलमा बस्नुहुन्छ र आफ्नो वचन पूरा गर्न चाहनुहुन्छ।
ईश्वरीय व्याकरण पाठ स्यामको लागि आविष्कारको जीवनको परिवर्तन गर्ने जीवन चक्रको, जीवन परिवर्तन गर्ने سفر हो - भित्री संघर्षहरूको भरिपूर्ण। सबै भन्दा माथि, त्यहाँ सामान्य संग तर्कहरु छन्, भावनात्मक bulwark कमान्ड कि साम आफ्नो आत्मा को लागी आफ्नो सुरक्षा को लागी बनाएको छ। किनभने परमेश्वर वास्तवमा कत्तिको बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जति स्यामले बुझ्न सक्दछन् कि परमेश्वरको प्रेम बिनासर्त र असीमित छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ, त्यति नै उनको भित्री रक्षा पतन हुन्छ। भगवानको अनुग्रहले, सामले आफूभित्र पूरै नयाँ ठाउँ फेला पारे। परमेश्वरको व्याकरण यति हास्यपूर्ण छ कि यो गतिशील छ - पीडा र ब्रेकडाउनको, तर अधिक प्रेम, छुटकारा र स्वतन्त्रता को।
ग्रेस टुडे भेरलाग, ISBN: 978-3-943597-40-0
बिल थोरल, ब्रुस म्याकनोल, जोन लिंच
सबैलाई स्थान चाहिन्छ जहाँ तिनीहरू वास्तविक हुन सक्छन्। स्टीभन कर्नरले वास्तवमै यो काम गर्‍यो: एक उच्च तलब पाएको जागिर, राम्रो श्रीमती, राम्रो छोरी। तर उनको एउटा कुख्यात रिसको कारण उनकी श्रीमतीले उनलाई लात बाहिर निकाली। स्टीभन स्वीकार्नु पर्छ कि आफ्नो काम पूरा छैन, उसलाई आफ्नो विवाह कसरी बचत गर्ने थाहा छैन, र उनीसँग कुरा गर्ने कोही छैन।
एक्कासी विलक्षण एन्डी देखा पर्दछ जसले स्टीभनको बारेमा धेरै जान्दछन्। उहाँ उसलाई बोको क्याफेमा लैजानुहुन्छ - त्यस्तो ठाउँ जहाँ स्वीकृति, क्षमा र अनुग्रहको शासन हुन्छ। त्यहाँ "असफल अस्तित्व" को बीचमा, स्टीभनको जीवनमा फिर्ता सुरु हुन्छ - र परमेश्वर जसले उहाँलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ।
आफ्नै प्रयासले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न असम्भव छ। तर ख्रिष्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ। आफ्नो विश्वप्रसिद्ध पुस्तकमा थोमाले ख्रीष्टियनहरूले कसरी पुनरुत्थानको शक्तिको अनुभव गर्न सक्छन् भनेर देखाउँछ। एक नीरस विश्वास एक गतिशील र विश्वासनीय जीवन हुन्छ।
"ठीक छ, म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ" (गलाती २:२०)। त्यो इयान थोमस को जीवन आदर्श वाक्य हुन सक्छ। आफ्नै प्रयासले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न असम्भव छ। तर ख्रीष्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ। यस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मा, लेखक देखाउँछन् कि कसरी ईसाईहरु अस्तित्व मा पुनरुत्थान को शक्ति को अनुभव गर्न सक्छन्। एक नीरस विश्वास एक गतिशील र विश्वसनीय जीवनमा परिणत हुन्छ जसले दैनिक जीवनमा बल विकास गर्दछ र प्रत्येक क्षणलाई यसको उपस्थितिबाट बाहिर निकाल्छ।
एससीएम आर। ब्रोकहस, ISBN: 978-3-417--26437१1-२-
प्रचुर मात्रामा जीवन
ख्रीष्टबिना ईसाई हुनु भन्दा अरु बढी अरु कुनै चिन्ताको विषय छैन, यस संसारमा येशूसँगको जीवनको सम्पूर्णता अनुभव गर्नु भन्दा क्रिश्चियन हुनु र रमाइलो कुरा अरू केही छैन। तपाईको आत्मिक जीवन एक असल इसाई बन्न कोशिश गर्ने बारेमा होइन, तर यहाँ सक्रियतापूर्वक ख्रीष्टलाई भेट्न र अहिले तपाईलाई आफ्नो जीवनमा समाहित गर्ने बारेमा हो। छोटो अध्यायहरूले तपाईंलाई दिनको लागि सोच्न खाना दिन्छ। सेक्सनहरूको अन्तमा प्रश्नहरूले तपाईंलाई समूहहरूमा विचारहरू आदानप्रदान गर्न वा मौनतामा प्रतिबिम्बित गर्न आमन्त्रित गर्दछ। तपाईंले निश्चित रूपमा पढ्नुपर्ने पुस्तक। यो कुनै चीजको लागि वर्षौंसम्म बेस्टसेलर भएको छैन।
एससीएम आर। ब्रोकहस, ISBN: 978-3-417--22887१8-२-
पहिलो प्रेमको समय
जब हामी ठूला हुन्छौं, हाम्रो व्यक्तिगत विकासले हाम्रो विश्वास र परमेश्वरको छविलाई बुझ्दछ। के त्यहाँ विश्वासको केहि प्रकार छ जुन जीवनको यो नयाँ चरणमा उपयुक्त र सही साबित हुन्छ? के हामी हाम्रो विश्वासमा अटूट आनन्दित हुन सक्छौं वा, स crisis्कट र अलगाव पछि, एक नयाँ मौलिकता प्राप्त गर्न सक्छन्? के हामी अन्तमा "पहिलो प्रेम" फेला पार्नेछौं?
Short 43 छोटो लेखहरूमा, हंस-जोआकिम एकस्टेनले इसाई विश्वासको मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गर्दछन् र आश्चर्यजनक परिप्रेक्ष्य र ईश्वरशास्त्रीय रूपमा गहनबाट प्रकाश पार्दछन्।
एससीएम आर। ब्रोकहस, ISBN: 978-3-7751--6019१3-२-
पूर्ण जीवनको चाबी
पहिले नै आफ्नो जीवनकाल (1816-1900) मा लेखक JC Ryle व्यावहारिक पवित्रता र परमेश्वरलाई पूर्ण आत्म-समर्पण आधुनिक ईसाईहरू द्वारा पर्याप्त रूपमा बाँच्न सक्दैन भन्ने गहिरो विश्वासमा आए। परमेश्वरको व्यक्तिगत डरको विषय दुखद रूपमा पृष्ठभूमिमा फिक्का भएको छ। क्रिस्चियन जीवनशैली धेरै क्षेत्रमा कम छ र हाम्रो दैनिक बानीहरू मार्फत परमेश्वरको शिक्षालाई सम्मान गर्ने महत्त्व बिर्सिएको छ। स्वस्थ प्रोटेस्टेन्ट र इभान्जेलिकल शिक्षा बेकार छ यदि यो एक पवित्र जीवन संग छैन। उत्साही र अवलोकनकर्ता धर्मनिरपेक्ष मानिसहरु द्वारा एक अवास्तविक र खोक्रो कुरा को रूप मा घृणित, यो विश्वास लाई बदनाम गर्दछ। यस प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न, बाइबलीय पवित्रताको पूर्ण पुनरुत्थान मार्फत दिशा परिवर्तन आवश्यक छ।
आफ्नो रूपान्तरण हुनु अघि, फ्रिट्ज बिन्डे (1867-1921) एक लडाकु नास्तिक र समाजवादी थिए जसमा बोल्ने स्पष्ट क्षमता थियो जसको साथ उनले आफ्ना श्रोताहरूलाई मोहित पार्न सक्षम थिए। येशू ख्रीष्टमा उहाँको रूपान्तरण पछि, उहाँले आफ्नो प्रतिभा आफ्नो प्रभुको सेवामा लगाउनुभयो र पाल र हलहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्ने येशूको निडर साक्षी बने। उसले आफ्नो साहित्यिक उपहारलाई धेरै पुस्तकहरू र लेखहरूमा विश्वासीहरूलाई विश्वासलाई असहज रूपमा बाँच्न प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्यो। उनका धेरै बहुमूल्य निबन्धहरू (उदाहरणका लागि, "क्रसको रहस्यमा", "विश्वासको रहस्य", "येशूलाई पछ्याउने तीन आधारभूत सर्तहरू" आदि) यस खण्डमा समावेश छन्।
सीएमडी क्रिस्टिलर मेडिअन डाएन्स्ट हनफिल्ड, ISBN:--3 939833 35--5- IS ISBN:--3 939833 35--5-
जहिले पनि तपाईंसँग - येशूबाट पत्रहरू
हरेक दिन तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ: तपाईंको लागि येशूको प्रेम असीमित छ! यस भक्तिपुस्तकमा तपाईले उहाँको दृष्टिकोणबाट शब्दहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरू प्रोत्साहन, सान्त्वनाका शब्दहरू हुन्। शब्दहरू जुन तपाईंको जीवनमा सही बोल्दछ। सायद तपाई भगवानबाट सुरक्षित रहन चाहानुहुन्छ? वा कुनै गाह्रो परिस्थितिमा सही निर्णय गर्न तपाईंलाई उहाँको घनिष्ठता चाहिन्छ?
जहाँसुकै तपाई जीवनको माध्यमबाट तपाईको व्यक्तिगत यात्रामा हुनुहुन्छ: यी भक्तिहरूले तपाईलाई मौनतामा पुर्‍याउँछ र तपाईको ब्याट्रीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा रिचार्ज गर्न मद्दत गर्दछ।
गर्थ मिडिया, ISBN: 978-3-86591-765-2
प्रेम र सम्मान
एक महिला आफ्नो पति द्वारा बिना शर्त प्रेम गर्न चाहन्छ। एक मानिस आफ्नी पत्नीबाट बिना शर्त सम्मान पाउन चाहन्छ। यो सफल विवाहको सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो। यस पुस्तकको बाइबलीय आधारभूत सिद्धान्तहरूले तपाईंलाई तपाईंको साथीलाई राम्रोसँग बुझ्न र एक अर्काको लुकेका आवश्यकताहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ। आफ्नी पत्नीलाई दैनिक जीवनमा प्रेम देखाउनुहोस् जुन उनी चाहन्छिन। र जान्नुहोस् कि कसरी तपाइँको पतिलाई उनी दिनहुँ महत्वपूर्ण छ मान्यता र सम्मान देखाउन। तपाइँ तपाइँको पार्टनरलाई बिभिन्न आँखाले देख्नुहुनेछ - र तपाइँको साझेदारी अभूतपूर्व गहराई र परिचितता प्राप्त गर्दछ।
गर्थ मिडिया, ISBN: 978-3-86591-492-7
हरेक दिन जीवन जिउन जुन हामी पूर्ण रूपमा निश्चित छौं कि हामी बिना शर्त भगवान्लाई माया गर्छौं - के यो वास्तवमै सम्भव छ र यो ठोस हिसाबले कस्तो देखिन्छ? वेन जेकबसेनले हामीलाई खुसीसाथ परमेश्वरको प्रेम कत्तिको गहिरो छ र यस तथ्यले हाम्रो दैनिक जीवनमा उहाँलाई कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको चरण-चरणमा ल्याउँदछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने येशू क्रूसमा हाम्रोलागि किन मर्नुभयो भन्ने बारेमा हामीले स्पष्ट कुरा प्रकट गर्दछौं। येशूले पाप र लाजलाई आफ्नो शरीर खान्न दिनुभयो ताकि हामी अब उहाँसँग एक सम्बन्धको आनन्द लिन सक्दछौं। नतिजाको रूपमा, हामीले पत्ता लगायौं कि हामी दासहरू होइनौं, छोरा र छोरीहरू हौं। यस बुबाले हामीलाई संसारका अरू सबै भन्दा बलियो र गहिरो मन पराउनुहुन्छ। उहाँको मायालु स्नेह हामी सबै अवस्थामा छ। हामी उहाँसँग जीवित सम्बन्धको अनुभव गर्छौं जसले हामीलाई लाजको पीडाबाट मुक्त गर्दछ र हामीलाई परिवर्तन गर्दछ ताकि हामी उहाँकै बच्चाको रूपमा जिउन सक्दछौं।
एक इसाई हुनु भनेको तपाईले जहिले पनि आशा गर्नुहुन्थ्यो
तपाईंको जीवनमा तपाईंले पहिल्यै के गर्नुभयो र सेटअप गर्नुभएन, तपाईंले जे हासिल गर्नुभयो र के गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको महत्त्व छैन - यी कुनै पनि कुराले तपाईंलाई येशू ख्रीष्टको नजिकको जीवनको जस्तो गहिरो आनन्दले भर्दैन। जब येशू तिनीहरूको कमजोरीमा मानिसहरूलाई भेट्नुहुन्छ, तिनीहरू जोश र गतिशीलताले ओतप्रोत हुन्छन्। जब उनीहरू ख्रीष्टमा तिनीहरूको विश्वासमा परिपक्व हुन्छन्, तिनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र आन्तरिक शान्ति हुन्छन् जुन अनुग्रहको यो बाटोमा मात्र पाउन सकिन्छ।
ग्रेस टुडे भेरलाग, ISBN: 978-3-943597-05-9
साँचो अनुग्रह - येशूको शिक्षा
चाहे डाँडाको उपदेशमा, प्रभुको प्रार्थनामा वा प्रकाशमा - येशूका धेरैजसो शब्दहरू इसाईहरूका लागि सातवटा छाप लगाइन्छ। तिनीहरू प्रायः गलतफहमी र गलत तरिकाले सिकाइन्छन्। यसले हाम्रो भगवानको छवि र विश्वासको रूपमा हाम्रो पहिचानमा नाटकीय प्रभाव पार्न सक्छ।
ग्रेग रीथर हामीलाई नयाँ करारको प्रकाशमा येशूका शिक्षाहरू हेर्न र प्रभुले वास्तवमै के भन्न र प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्न चाहन्छ। उनको चिन्ता भनेको व्यवस्थाको पुरानो प्रणालीबाट मानिसहरूलाई स्वतन्त्र पार्नु र आत्माको नयाँ प्रणाली, नयाँ करारमा डो lead्याउनु थियो। यदि हामीले यो चिनेनौं भने, हामी परिचित बाइबल अंशहरू नयाँ, उज्यालो प्रकाशमा देख्नेछौं र अन्तमा तिनीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुनेछौं - कुनै डर बिना। हामी बुझ्नेछौं कि येशूले भन्नुभएका र गर्नुभएका सबै कुरामा, उहाँको प्रेम र अनुग्रह लुकाइएको छ।
ग्रेस टुडे भेरलाग, ISBN: 978-3-95933-066-4
साँचो अनुग्रह: येशूको दृष्टान्त
चाहे अन्जीरको रूखको दृष्टान्तमा, सुम्पिएको प्रतिभाको, वा दस कुमारीहरूको - येशूका धेरैजसो दृष्टान्तहरू मसीहीहरूका लागि समस्या हुन सक्छ। तिनीहरू प्रायः गलतफहमी र गलत अर्थ लगाइन्छन्। यसले हाम्रो भगवानको छवि र विश्वासको रूपमा हाम्रो पहिचानमा नाटकीय प्रभाव पार्न सक्छ। ग्रेग रीथर आफ्ना पाठकहरूलाई नयाँ करारको प्रकाशमा येशूका दृष्टान्तहरू हेर्न सहयोग गर्न चाहन्छन्। सरल र जीवन्त ढ he्गमा उनले हामीलाई पुरानो करार, कामको प्रणाली र शरीरबाट स्वतन्त्र पार्न र नयाँ करारका साथ परिचित गराउन येशूले भन्नुभएका कथाहरूको नजिक ल्याए।
ग्रेस टुडे भेरलाग, ISBN: 978-3-95933-122-7
यो पुस्तक तेल जस्तै तल जान्छ - किनकि रायन रुफसले घोर ईसाई प्राणहरूका लागि स्पष्ट, पौष्टिक सन्देश घोषणा गर्दछ। गलत धारणामा आधारित विश्वासले आध्यात्मिक मृत अन्ततर्फ डो .्याउँछ। त्यसकारण रायन रुफसले स्पष्ट रूपमा कानूनी र आत्म-धार्मिकताको पापी मार्गलाई परमेश्वरको अनुग्रहको सरल र स्वतन्त्र मार्गसँग तुलना गर्दछन्। अनुभवी मसीहीहरूले समेत अनुग्रहको स्फूर्तिदायी धर्मशास्त्रको साथ कडा अभिषेक गर्छन्।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-14-1
अनुग्रहको स्पष्ट सन्देश
अनुग्रह भनेको सब भन्दा उत्तम सन्देश हो जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सुन्न सक्दछ। यसमा तपाईलाई स्वतन्त्र गर्ने, रूपान्तरण गर्ने र जीवनको लागि सुसज्जित पार्ने शक्ति छ। अनुग्रह तपाईं कत्तिको सिद्ध हुनुपर्दछ भन्ने कुराको बारेमा होइन, तर तपाईं ख्रीष्टमा कत्ति परिपूर्ण हुनुभयो। तपाई ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदा तपाईले उहाँ मार्फत के गर्नुहुनेछ र के गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सँधै तपाईं पुग्नुहुन्छ। सात शक्तिशाली शिक्षण एकाइहरूले तपाईंलाई स्पष्टता र सरलताको साथ अन्य व्यक्तिहरूमा अनुग्रहमा पार गर्न मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा आनन्द र उत्साह सिर्जना हुन्छ।
दश शब्दमा सुसमाचार
दस पदहरू प्रयोग गरेर, पॉल एलिसले यो स्पष्ट पार्दछ कि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार केवल शुभ समाचार मात्र होइन, तर सबैभन्दा खुशीको, क्रान्तिकारी, स्वतन्त्र सन्देश हो जसको कल्पना गर्न सकिन्छ। ख्रिष्टमा हामी प्रेम, मेलमिलाप, मुक्ति, उहाँसंग एक भएको, स्वीकार्य, पवित्र, न्यायी, पापको मरेका, नयाँ र शाही हुन्छौं। वैधानिकता र प्रदर्शन सोचको लागि अब कुनै ठाउँ छैन।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 78-3-943597-53-0
बीस प्रश्नहरूमा सुसमाचार
वैधानिकता र अनुग्रहबाट बाहिर जाने बाटोमा हामी प्रायः प्रश्नहरूले भरिएका हुन्छौं। हामीले परमेश्वर र वास्तवमा को हुनुहुन्छ र येशूको कामले हाम्रो लागि के अर्थ राख्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। हाम्रो प्रश्नहरू कुञ्जीहरू जस्ता छन् जसले भण्डारहरू अनलक गर्दछ। यस पुस्तकका उत्तरहरू छन् र हामीलाई परमेश्वरसँग एक विश्वसनीय सम्बन्धको साँचो दिन्छ।
यस पुस्तकमा प्रश्नहरूले तपाईंलाई नयाँ स्थानहरूमा लैजान्छ। यसले तपाईंलाई बुबाको मनपराउने उचाइहरूमा नाच्नेछ। सबै भन्दा, ती येशू संग गहिरो सम्बन्ध गर्न को लागी, जो सबै भन्दा ठूलो जवाफ हो।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-48-6
जोन लिंच, ब्रुस म्याकनोल, बिल थोरल
हामीले सोच्यौँ कि हामी निको भयौं, तर हामीमध्ये धेरैले अनजानमै तपाईंको नयाँ जीवनमा पुरानो, निर्जीव दृश्य ल्याएका छौं। यस पुस्तकले यो पत्ता लगाउँदछ कि मानिसहरु आफ्नै पापको समस्याहरु आफैंमा सामना गर्न ग्रस्त छन्। यसले समुदायलाई विष दिए र मूल राम्रो समाचारलाई अस्पष्ट बनायो। हामीले एउटा मापदण्ड बनायौं जुन हामी बाँच्न सक्दैनौं - त्यसैले हामीले आफैलाई भने यो परमेश्वरको स्तर हो। हामीमध्ये कोहीले यो प्रहसनलाई बिदाइ गरेका छन र शyn्कास्पद, शंकास्पद र उदासीन भएका छौं।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-95933-055-8
धर्म बिना भगवान
इसाईहरू प्राय: अनुग्रह र आज्ञाहरूलाई समेट्न संघर्ष गर्दछन्। प्रदर्शन गर्न दबाव, एक दोषी अन्तस्करण र डर परिणाम हो। तर त्यो हुनु आवश्यक छैन। एन्ड्र्यू फार्ले देखाउँदछ कि कानूनहरू र आज्ञाहरू पालन गर्नु अब इसाईहरूको लागि समस्याको विषय होइन। बरु, उनीहरू परमेश्वरमा आराम पाउन र स्वतन्त्र जीवन बिताउन सक्छन्। एन्ड्र्यू फरलेको लागि, इसाई जीवन अरू सबै भन्दा एक चीजको रूपमा रहन्थ्यो: परमेश्वरलाई कुनै पनि हालतमा खुसी पार्ने कठोर प्रयास - कठोर, कडा धर्म। यसको परिणाम आत्मिक थकान, निराशा र चर्चबाट अत्यन्तै निराशता पनि थियो। यद्यपि आफ्ना प्रश्नहरू र श doubts्काको बीचमा उनले एउटा यस्तो चीज भेट्टाए जसले सबै कुरा परिवर्तन गर्‍यो: परमेश्वरको मुक्तिको वास्तविकता, बिना शर्त अनुग्रह।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-02-8
येशू शुद्ध। १००% प्राकृतिक थप बिना
सबै अनावश्यक गिट्टीबाट टाढा, येशू ख्रीष्टको खुशीको, मुक्ति सन्देशलाई यसको मूल रूपमा फर्कनुहोस्! एन्ड्र्यू फार्ली यस्तै कुरा हुन् जसले व्यक्तिगत अनुभव गरे कि कसरी कानुनी व्यवस्था, धार्मिक दबाब र धार्मिक कार्यले निराशा र उदासिनता निम्त्याउन सक्छ - किनकि अहिलेसम्म ख्रीष्टियन भएर आउने सबै कुरा ख्रीष्टको आत्मामा छैनन्। Farley पुस्तक जीवन परिवर्तन हो।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-15-8
तपाईंले विरासतमा पाउनुभयो!
यस पुस्तकका लेखकले हामीलाई मानिससँग परमेश्वरको कथाको मनमोहक यात्रामा लगे। उनले परमेश्वरका विभिन्न करारहरूको व्याख्या गर्दछन् - अब्राहमसँग, मोशामार्फत र अन्तमा येशू ख्रीष्टमा भएको नयाँ, अनन्त करार। र यो सबै यो छ: किनकि ख्रीष्टमा हामी एक पटक र सबैको लागि मुक्ति पाउँछौं र परमेश्वरको हकदार बन्छौं। विशेष गरी समग्र दृश्यमा, यो स्पष्ट हुन्छ कि हामी अब त्यहाँ केहि थप्न सक्दैनौं। 'एउटा चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण पुस्तक। यसले परमेश्वरको अनुग्रहमा रहेको स्वतन्त्रतालाई देखाउँदछ।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-20-2
नियमको लागि आशयित
सहज सफलता, पूर्ति, र एक विजयी जीवनको रहस्य। किन यति धेरैले यस पुस्तकलाई स्फूर्तिदायी हावा फेला पारे? तपाईंलाई सफलता, पूर्ति र विजयको अनुभव गर्न बोलाइएको छ। यो पुस्तकले तपाइँ कसरी तपाइँ प्रत्येक समस्या, अभाव, र तपाइँको मार्गमा खडा खतरनाक बानी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ देखाउँदछ। यो तपाईले के गर्नु पर्ने होईन, तर तपाईका लागि के भइसक्यो भन्ने बारे हो। तपाईंले आफैंमा केहि गर्न आवश्यक छैन, किनकि यो पहिले नै तपाईंको लागि गरिसकिएको छ। परिवर्तनको लागि तपाईको इच्छाशक्ति प्रयोग गर्नुपर्दैन - परमेश्वरको शक्ति र शक्तिले तपाईलाई परिवर्तन गर्दछ। आज नै सामना गर्न र बिरामी, वित्तीय कठिनाइ, टुटेको सम्बन्ध, र विश्वास र अख्तियारको साथ विनाशकारी बानीहरूमाथि शासन गर्न शुरू गर्नुहोस्! जोसेफ प्रिन्स एक अद्भुत बुबा, पति, र मित्र हो जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो चर्चहरूको एक नेतृत्व गर्दछ। ऊ कसरी जिउँछ र आफैमा लगानी गर्छ जब उसले हामीलाई वचन दिन्छ कि विजयी र ओतप्रोत जीवनको कुरा गर्छ तब उसले उसका शब्दहरू विश्वासयोग्य र विश्वस्त बनाउँदछ।
प्रकाशक अनुग्रह आज, ISBN: 978-3-943597-70-7